Yakanakisa Trailer Tangi yeCryogenic Liquid Gasi Mugadziri uye Fekitori | BTCE
BTCE Trailers dzakagadzirirwa kutakura LOX, LAR, LIN, LNG iine hunyanzvi huripo kubva pa10m³ kuenda ku60m³ uye ine super insulation, yakagadzirwa zvinoenderana neChinese Code, AD2000-Merkblatt, EN TPED/CE/ADR, ASME kodhi, Australia/New Zealand AS1210. etc.
BTCE Trailers dzakagadzirirwa kutakura LOX, LAR, LIN, LNG inokwanisa kuwanikwa kubva pa3m³ kuenda ku60m³ uye ine super insulation, yakagadzirwa zvinoenderana neChinese Code, AD2000-Merkblatt, EN TPED/CE/ADR, ASME kodhi, Australia/New Zealand AS1210. etc.
∎ Magadzirirwo evhoriyamu yepamusoro ane mitemo nemirau yakakodzera;
■ Nguva yakareba yekurasikirwa-isina-kurasikirwa kana kurasikirwa kwakaderera kwekufambisa daro refu;
■ High-vacuum yakawanda-layer winding insulation kana perlite insulation;
■ Kuturunura kana kuburitsa pombi yecryogenic;
■ Mutsara wezvigadzirwa: LNG Trailer tank, Cryogenic industrial Gas Trailer tank;
Model Gross Volume (m3) Net Vhoriyamu (m3) Hurefu kana kureba(m) Diameter(m) Pakati NER LO2(% kukwanisa / zuva) MAWP(MPa) Motokari yakazara/semi-trailer
CT5 5.72 5.44 4.7 1.9 LOX\_LIN\_LAR 0.3 1.7 Motokari yakazara
CT12 12 11.4 6.4 2.2 LOX\_LIN\_LAR 0.2 1.6 Motokari yakazara
CT20 20 19 7.6 2.3 LOX\_LIN\_LAR 0.153 2.2 Motokari yakazara
Yakakosha dhizaini yekumanikidza uye vhoriyamu inowanikwa pane yakakosha chikumbiro. Dhizaini uye yakatarwa inogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga.
Kambani yedu inoshanda mukugadzira cryogenic liquid transport trailer, vhoriyamu yechigadzirwa inovhara 3m³ ~ 60m³, kushanda kumanikidza 0.2mpa ~ 3.0mpa, ine yepakati mvura nitrogen, liquid oxygen, liquid argon, carbon dioxide uye LNG, etc. Kubva payakavambwa muna 2008. , Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakapa mhando yepamusoro cryogenic liquid transport trailer zvigadzirwa kuvatengi vepasi rose kwenguva dzakawanda, uye bhizinesi rayo rinosanganisira Europe, America neSoutheast Asia. Chigadzirwa chiyero chinogona kusangana nekushandiswa kwepasirese. Zvigadzirwa zvedu zvine maitiro ehuremu huremu, vhoriyamu yakakura, yakaderera mari yekushandisa. Senyanzvi yekugadzira cryogenic liquid carrier, tinoedza kupa zvemhando yepamusoro, zvemhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvebasa repamusoro kune vatengi. Naizvozvo, isu tine boka revatungamiriri vane ruzivo rwakanyanya uye nyanzvi dzinokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye vane kugona kugadzira zvigadzirwa zvitsva kuwedzera misika yedu yemumba neyekunze. Tinotarisira nemoyo wese kusvika kwevatengi kuti vaunze bhizinesi rinobudirira kwatiri tese.
CT-18CM-24SI Trailer uye kurongeka kwayo kwepombi
Muenzaniso CT-55.8cm-7SI LNG tri-axial semi-trailer
Zvakapfuura: Vertical Super Yakakura Kuchengetera Tangi
Zvinotevera: VTN HTN Series Yakamisikidzwa LNG Kuchengeta Matangi